सावधानीले कोरानाबाट बच्न सकिन्छ
हिम्मत र अनुशासनले कोरोनाको महामारीलाइृ जित्न सकिन्छ
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रवक्ताले भनेका छन्– विश्वभरिका वैज्ञानिकहरु अनुसन्धानमा जुटेका छन् । कुनै पनि बेला सुखद समाचार आउन सक्छ । तर कोरोना भाइरसको प्रकोप यसरी बिस्तारित भएर गएको छ कि यसलाई हिम्मत र अनुशासनले मात्र मात दिन सकिन्छ । हिम्मत गरौं, अनुशासनमा बसौं, कोरोना भाइरसको महामारीलाई जित्न सकिन्छ ।
हो, कोरोनालाई नागरिकको अनुशासन र विश्व स्वास्थ्यकर्मीले सुझाएका विषयमा जीवनलाई ढाल्ने हो भने कोरोनाको महामारीलाई रोक्न सकिन्छ । कोरोना अव विश्व समस्या भइसक्यो । मानव सभ्यता बचाउे जिम्मेवारी हामी सबैको हो । नेपाल कोरोना फ्रि मुलुक रहेन । नेपालमा पनि कोरोना छिरिसकेको छ । कुनै पनि बेला महामारी देखिन सक्छ । हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले सुझाएका ५ कुरामा ध्यान दियौं भने कोरोनाको कोपबाट बच्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ ।
१. कतै पनि छोएपछि साबुन पानीले हात धोउँ ।
२. हरदम मास्क लगाऔं । नाक, कान, आँखा, मुखमा अनावश्यक नचलाऔं ।
३. अनुहारमा कसैलाई छुन नदिउँ, हात नमिलाऔं, नमस्कार गरौं ।
४. कसैसँग टाँसिएर नबसौं, केही दूरीमा बसौं । दूरी कायम राखेर कुरा गरौं ।
५. बिसन्चो लागे घरमै बसौं । जरो बढे, घाँटी टाउको दुखे नजिकको स्वास्थ्यकर्मीलाई जचाऔं ।
नेपालमा एकजनालाई कोरोना देखिएको थियो, उपचार गरेर ठिक भए । अर्का एकजना फ्रान्सकी युवतीमा कोरोना देखिएपछि उपचार भइरहेको छ । उनीसँग आएका र अरु केही क्वारेन्टाइनमा छन् ।
डाक्टरहरु भन्छन्– १९१८ मा स्पानिस फ्लू पनि महामारी नै थियो । ५ वर्ष अघि आएको इबोला पनि महामारी नै हो । यी सबै नागरिक सचेतता र आत्मबलले रोकिन पुगेका थिए । कोरोना पनि त्यस्तै महामारी हो । यो महामारी फैलने सम्भाबना प्रवल भएरै सरकारले स्कूल, कलेज बन्द गराएको हो । भिडभाड हुने कुनै पनि क्षेत्र बन्द गरेपछि चैत ११ देखि १८ गतेसम्म मुलुकै्र लक डाउन गरिएको छ । हामी बन्दाबन्दी भएर सावधानीमा छौं ।
स्वास्थ्यविज्ञहरु भन्छन्– हामीले कोरोनालाई परास्त गर्न सकिएन भने विश्व जनसंख्याको ६० प्रतिशतसम्ममा फैलिन सक्छ । कोरोना लागेका प्याट्टै नमर्ने र सम्पर्कमा आउनेहरुमा फैलिदै जाने भएकाले भयभित बनाएको हो । चीनको बुहानबाट फैलिएको कोरोनाको कोपभाजनलाई चीन, हङकङ, कोरिया, ताइवानहरुले रोकिसके । बुहानका नागरिकलाई खुला गर्ने योजना बनाइसक्यो चीनले । यो सबै सरकारको दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति, नागरिकको हिम्मत र संचेतनाबाट सम्भव भएको हो । उडान स्थगित गर्न, नेपाल भित्रिने र तिनका सम्पर्कमा आएका जो कसैलाई जाँच्न, क्वारेन्टानमा राख्न, सीमा नाका बन्द गर्न र सरकारमा बस्ने र नागरिकहरुले यो महामारीलाई रोक्ने विधि अपनाउन ढिलो भएकै हो । तर सुरु भो, यो सतर्कताको पहिलो कदम हो । कुनै पनि प्रकारको भ्रम फैलाउनेलाई ठाउँका ठाउँ दण्डित गर्नका लागि एउटा टिम बनाइयोस्, ताकि जनताले सत्य बुझुन्, तत्कालै सतर्क हुनसकुन ।
अव सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको कोरोनाको महामारीलाई काबुमा लिन व्यापक परिक्षणविधि अपनाउनुपर्छ । संक्रमितलाई आइसोलेशनमा, सम्पर्कमा आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्नुपछि । कोरोनाविरुद्ध राष्ट्रिय एकता बनिसकेको छ । हरेक पार्टीका कार्यकर्ता २० लाखभन्दा बढी छन्, तिनलाई रोजगारीका रुपमा तालिम दिएर परिचालन गर्न सकिन्छ । सय दिने रोजगारीका लागि सरकारले दरखास्त आह्वान गरेको छ । तिनलाई तत्काल भर्ति गर्नु जरुरी छ । स्वास्थ्य दस्ता बनाएर मुलुकका ७६१ सरकारमार्फत परिचालित गर्न सके कोरोनाको भयबाट मुक्ति पाउन सकिनेछ । धेरै हताहती हुनसक्ने सिथ्तिबाट पार पाउन सकिन्छ । देशमा रहेका ७६१ सरकार, निर्वाचित ३५९२४ प्रनिनिधि हुनुपर्नेजति गम्भीर देखिदैनन् । गाउँपालिकादेखि संसदसम्मका जनप्रतिनिधि र सरकारहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रमा विदेश गएर आउने, विदेशबाट आएकाको तथ्यांक राखेर व्यापक स्वास्थ्यजाँच गर्दै सावधानीको चेतना फैलाउनु पर्छ । अरु ढिलो नगरौं, खतरा बढ्न नदिउँ । मृत्युघण्ट बजिसक्यो । घरबाट ननिस्कौं, संक्रमण रोकौं, बढ्न नदिउँ ।
स्वास्थ्यजाँचका लागि परिक्षण गर्ने किट, ओखती, पञ्जा, मास्क, भेन्टिलेटर, ड्रेस, स्यानिटाइजर, डिटोल के के चाहिने हो, त्यसको आपूर्तिका लागि देशभित्रका सबै राज्य सञ्जाल, विदेशस्थित दूतावासहरु, दाताहरु, नेपालका मित्रदेश, व्यक्तिहरु सबैलाई सक्रिय पारिहाल्नुपर्छ । जनतामा फैलिएको डर हटाउन र हिम्मत बढाउन नागरिक समाज पनि अगाडि आउनुपर्छ । जसले जे सक्छ, आआफ्नो ठाउँबाट सेवा गर्ने बेला हो यो । बच्ने र बचाउने समय हो यो । जवाफदेही लिनुपर्नेहरु के तमासा हेरिरहेका छन् ? तिनको मूल्यांकन खोई ?
जहाँसुकैका नेपाली हुन्, तिनीहरु आउन चाहन्छन् भने आउनसक्छन् । आउने हक छ । नेपालतिर हेरेर सीमामा अड्किनु नपरोस् । विचल्लीमा पार्ने हक सरकारलाई छैन । घर नआए कहाँ जाने ? सर्त यत्ति हो, तिनीहरुको जाँच हुनुपर्छ, क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । आइसोलेसन उपचारमा पठाउनु पर्छ भने पठाउनु पर्छ । सरकार जाँचमा निर्मम हुनुपर्छ, विवेकहीन हुनुहुन्न ।
झण्डै साँढे २ लाखभन्दा बढीको सुरक्षा निकाय छ । सेना हर्कतमा आएको छ, अरु कहाँ कहाँ छन्, कति सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग भइरहेको छ, तिनलाई यतिबेला राष्ट्रिय संकटको बेला सुरक्षामा नखटाए कहिले खटाउने ? जो सेवानिवृत्त विज्ञ, विशेषज्ञ र व्यक्तिगत विशेषज्ञहरु छन्, तिनको पनि सेवा लिनुपर्छ । सरकारले खडा गरेको कोषमा राष्ट्रपति, मन्त्री प्रधानमन्त्री, कर्मचारी, अन्य सघसंस्थाहरुले समेत चन्दा हाल्न सुरु गरेका छन् । चन्दा प्रचारमा छ, उपयोग पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । भूकम्पमा आएका राम्रा राम्रा सामान प्रभावशालीले पेवा बनाएजस्तो हुनुभएन । किनकि कोरोना महामारी डढेलो बन्यो भने आगोले कसैलाई बाँकी राख्नेछैन, खरानी बनाउने छ ।
इटलीका पूर्व प्रधानमन्त्रीले १ करोड ९ लाख डलर अस्पताल बनाउन दिए, फेसबुकले, माइक्रोसफ्टले १० लाख १० करोड डलर दिए, व्यवसायी ज्याक माँ१ करोड ४० डलर दिएपछि पूर्वी र दक्षिण एसियाका मुलुकहरुलाई भेन्टिलेटर, जाँच किट, मास्क किन्न १८ करोड डलर दिने घोषणा गरे । नेपाली बिग हाउस, व्यवसायी, व्यापारी, ठूला घराना किन भद्रो हेरिरहेका छन् ?
बरु नागरिकहरु चन्दा उठाएर मास्क बितरण थालेका छन्, कोही निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिइरहेका छन् । छिटो अगाडि आउनुपर्ने र राज्यबाट वर्षेनी ठूलो आर्थिक लाभ लिनेहरु सुतेर बसेका छन् । मानव सभ्यता नै बचेन भने सम्पत्तिको के काम ?
बल्ल चौधरी ग्रुप परीक्षण किट लिएर निस्केको छ । बाँकी गैरआवासीय संघका कुमार पन्त, शेष घले, उपेन्द्र महतो, भाटभटेनी, वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत, लाक्पा सोनाम शेर्पा,रामेश्वर थापा, गोल्छा–ज्योति–कान्तिपुर, खेतान, त्रिवेणी, शंकर, विशाल, अम्बे, गोल्यान, कुशकुमार जोशी, सुरज वैद्य, चण्डी ढकाल, हरिभक्त शर्मा, पशुपति मुरारका, प्रदीपजंग पाण्डे, भवानी राणा, चेम्बर अफ कमर्श, सीएनआई कोही पनि अगाडि आइसकेको अवस्था छैन । यतिमात्र होइन, होटल्सहरु, टे«किङ र अन्य कित्ता पनि बेपत्ता छन् । अर्वौं नाफा कमाउने वैंक, वीमा, नेपाल टेलिकममात्र होइन, स्वीस वैंकमा पैसा राख्ने को को हुन् र सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर नतिर्ने एनसेलले पनि देखाउनु पर्नेजति चासो दिएको देखिन्न ।
सरकारले खाद्य र मास्क, मेडिसिन र उपचारमा विशेष ध्यान देओस्, हामी नागरिकले कोरोना बुझ्नुपर्छ । ¥याल, थुकबाट सर्छ । हावाबाट सर्दैन । अपनाउनै पर्ने सावधानी अपनाऔं । नडराऔं, ख्यालठट्टा नगरौं । यो महामारीसँग मिलेर लडौं, परास्त गरौं ।
कोरोना महामारी हो । हिम्मत गरौं, हिम्मत नहारौं जित्न सकिन्छ ।